Indlu encinci enomtsalane kwi-15min ukuya e-Erfurt. - I-Airbnb
Indlu encinci enomtsalane kwi-15min ukuya e-Erfurt.
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguMario
Indlu encinci ibekwe kwindlela yedolophu phakathi kweNeudietendorf kunye ne-Erfurt. Ingaphakathi litsha kwaye layilwa ngothando oluninzi. Ifenitshala yenziwe ngamaplanga kwaye ikhupha umtsalane okhethekileyo. Igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela lijonge emazantsi, igumbi lokuhlala elinesifrentshi. Ibalcony ejonge emantla. Indlu yonke ifudunyezwa ngesitovu sepellet ekhitshini (umninimzi unyamekela ukugcinwa kwemihla ngemihla ngokubonisana). Ukufika (umzekelo kubahambi ngezoshishino) kunokwenzeka ngalo naliphi na ixesha losuku ngamalungiselelo.
I-TinyHouse yethu yeyona ndawo igqibeleleyo yokukhwela ibhayisekile kunye nokhenketho lokuhamba intaba, uhambo lwesixeko kunye namava emidlalo yasebusika eThuringia. Ungafika e-Erfurt ngaphantsi nje kwesiqingatha seyure- nokuba ngemoto, ngololiwe okanye ngebhayisekile yimizuzu engama-45 ukuya e-Oberhof, kunye nase-Weimar nase-Eisenach.
Kodwa abakhenkethi beshishini e-Erfurt okanye kwipaki yoshishino yase-Erfurter Kreuz kunye nabatyeleli bentengiso enobulungisa nabo banokuxhamla kumgama omfutshane.
4.95 · Izimvo eziyi-166
I-Ingersleben yilali yokusila engaphandle kwe-Erfurt. Iyinxalenye yelali yaseNesse-Apfelstädt. Namhlanje, i-Zitzmann mill isasebenza kwaye ibumba ubomi basezilalini.
Kummandla wethu kukho ababhaki, ivenkile yokusila, iivenkile ezinkulu ezimbini kunye neendawo zokutyela ezilula kunye neesnack bars.
Indlela yebhayisekile yaseThuringian yeedolophu kunye ne-Apfelstädt yebhayisekile idlula kwi-Ingersleben. Indlela yomjikelo weGera yimizuzu eli-10 kude.
Indlela yeSt James ibaleka kufutshane nathi.
Indawo engqonge i-Ingersleben ineenduli kwaye isetyenziswa kakhulu kwezolimo. Nokuba ikwicala lase-Erfurt okanye kwiinqaba ezikufutshane zaseDrei Gleichen-Ingersleben yindawo efanelekileyo yohambo lokuhamba.
Imibuzo inokubuzwa ngefowuni, iSMS okanye i-imeyile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nesse-Apfelstädt, OT Ingersleben